Kafe (maniry) - Wikipedia
Kafe mamony any amin' ny tanin-kafe any Brezily
Ny kafe dia zavamaniry, karazan-kazo, izay volen' ny olona mba hahazoana voany hanamboarana zava-pisotro ata hoe kafe ihany koa. Mahatratra 80 ny karazan-kafe ka ny sasany tena hazo avo fa ny sasany indray hazo madinika. Any amin' ny faritra manana toetanin-jana-pehintany aty Afrika sy any Azia no fiavian' ny kafe. Coffea L. ny anarany ara-tsiansa. Roa karazana ny kafe tena fambolin' ny olona, dia ny Coffea arabica et Coffea canephora. Misy ihany ny maboly ilay karazana atao hoe Coffea liberica.
Fielezan' ny fambolena kafe[hanova | hanova ny fango]
Faritra niavian' ny kafe
Efa tany amin’ ny taonjato faha-7 tal. J.K. no nambolen’ ny olona ny kafe, izay vanimpotoana namokarana azy tany Arabia, teny amoron’ ny Ranomasina Mena. Nanomboka tamin’ ny taonjato faha-15 dia niitatra nankany Iemena ny fambolena kafe, avy eo nankany amin’ny Atsinanana manontolo eto amin’ izao tontolo izao.
Nandritra ny taonjato faha-17 dia nitombo tsikelikely ny fisotroana kafe tao Eorôpa. Nanomboka namboluy kefe ny Hôlandey tao amin’ ireo zanataniny toa an’ i Java sy i Seilana. Nandritra ny ampahefany voalohany amin’ ny taonjato faha-18 dia nanomboka namboly kafe tany Martinika ny Frantsay. Nanomboka namboly kafe amin’ ny tany midadasika tany Jamaika ny Britanika tamin’ ny taona 1723 ary ny Espaniôla tany Filipina tamin’ io taona io ihany. Nitatra nankany Amerika Latina ny fambolena kafe, ny tao Brezily dia efa tamin’ ny taona 1723 no anomboka.
Ireo firenena mpamokatra kafe (taona 2018)
1 Brezily 3 556 638
2 Vietnamy 1 616 307
3 Indônezia 722 461
4 Kôlômbia 720 634
5 Hôndorasy 481 053
6 Etiôpia 470 221
7 Pero 369 622
8 India 326 982
9 Goatemala 245 580
10 Oganda 211 200
10 303 122
Miovaova ny filaharan' ireo firenena mpamokatra kafe araka ny habetsahan' ny vokatra, nefa i Brezily no lohalaharana amin’ ny fambolena kafe ao Amerika Atsimo sy manerana izao tontolo izao. Niely aty Afrika koa ny fambolena kafe nandritra ny taonjato faha-20, ka i Madagasikara no lohalaharana taty Afrika, izay arakarahin’ i Kôngô sy i Kamerona ary i Angôla. Tonga tany Azia koa ny fambolena kafe, na dia tsy tena mandroso be aza, toy ny any Indônezia.
Tamin' ireo taona 2000, ny mpamokatra kafe voalohany dia i Brezily, manaraka azy i Kôlômbia, i Indônezia, i Japana, i Kôtidivoara, i Meksika, i Goatemala, i Oganda ary i Etiôpia. Ny ankabetsahan’ ny kafe vokarina maneran-tany dia avy any Amerika, ka ny kafe arabica no vokariny amin’ izany.
Karazan-kafe famboly[hanova | hanova ny fango]
Faritra ambolena ny kafe robusta (r) sy arabica (a) ary robusta-arabica (m) eto amin' izao tontolo izao.
Maro karazana ny kafe raha isaina ny kafe dia, fa karazany roa ihany no tena be mpamboly, izay avy aty Afrika: ny kafe arabica (Coffea arabica) sy ny kafe robusta (Coffea canephora). Ny kafe arabica dia avy any Etiôpia ary volena indrindra any Amerika Latina. Ny kafe robusta dia volena indrindra aty Afrika, indrindra ao Kôtidivoara, sy any Atsinanana Indrindra, indrindra ao Vietnamy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kafe_(maniry)&oldid=999162"
Voaova farany tamin'ny 20 Desambra 2020 amin'ny 08:07 ity pejy ity.